Boorsada Bixinta Cuntada Tayada Ganacsi Bacaha sidda dahaaran ee cuntada kulul
Function: bac dahaaran
Midabka: sida sawirka ama kuwa kale
Qiimaha: Qiimaha tartanka ee warshadda tooska ah
Shayga: bacda sidda dahaaran
Magaca badeecada: bacda qaboojiyaha kubbadda dahaaran
Awoodda Bixinta: 50000 Bacaha/Bacaha Bil kasta Boorsada bixinta cuntada
Faahfaahinta Baakadaha: bac kasta oo cuntada lagu bixiyo oo ku jirta bac poly, 12pcs halkii kartoon ee dhoofinta
Qiyaasta Waqtiga (maalmo) 25 In laga wada xaajoodo
Shayga Boorsada Bixinta Cuntada Tayada Ganacsi Bacaha sidda dahaaran ee cuntada kulul
Cabbirka 23 x 13 x 15 inji
Midab Madow ama wax kasta oo la habeeyay
Logo Daabacaadda Shaashadda, Daabacaadda Sublimation, Kala-wareejinta Kulaylka, Dabeecadda, iwm.
Waxyaabaha 600D Polyester
Waqtiga tusaalaha 5-7 maalmood
Xidhmada 1pcs bacda gaarsiinta raashinka bac kasta oo bool ah; qayb ka mid ah ku rid kartoonka.
Waqtiga dirida 30-35days kadib marka la xaqiijiyo amarka.
* * Cimri dherer aan la rumaysan karin Bacaha keenista cuntada waxaa lagu sameeyaa Polyester heer sare ah halkii laga samayn lahaa polyester jaban si loo kordhiyo cimri dhererka. Waxaa ku lammaansan sibraar si tolnimo leh loo tolay, ha ka welwelin inaad bacda garaacdo.
* * Farsamooyin badan: Bacahaas waxaa loogu talagalay dadka cuntada siiya, wadayaasha gaarsiinta cuntada, bacaha raashinka dib loo isticmaali karo ama bacda qaboojiyaha. Baaxad weyn oo xoog leh oo qaadi kara weelasha wax lagu dubo oo leh dahaarka qaro weyn oo cunto kasta ka dhigi doona mid kulul ama qabow.
* * Dahaarka iyo dhumucda dhumucda leh: Tani waxay ku hayn doontaa cunto kasta sida kulul ama qabow ee la rabo. Nadiifintu waxay kaloo ka dhigtaa bacda mid adag oo ku filan si ay u haysato cunto kasta, haddana way isku laalaabi kartaa kaydinta fudud.
* * Dibedda Dhumucsan - Dusha sare ee 600D polyester -ka ayaa hubin doonta in bacda pizza dahaarka leh ay noqon doonto mid la isku halleyn karo sanadaha soo socda. Boorsadan raashinka ah ayaa sidoo kale ka kooban laba gacmood oo dusha sare ka samaysan si ay u fududaato qaadista iyo siibadaha laba -geesoodka ah ee xooggan, oo si gaar ah loogu talagalay in aan la suuxin.
* * Kaydinta Fudud - Boorsadan gaarsiinta pizza waa mid la burburin karo, ilaa cabir is haysta si loogu kaydiyo si fudud oo hoosteeda la xoojiyay si cimri dheeri ah loo helo. Waxay fadhiyaan si siman marka la raro si raashinkaagu uusan ugu dhex wareegin baabuurkaaga ama jirriddaada.
* * Halista Bilaashka ah - Boorsadeena dahaaran waxay daboolaysaa baahida sare ee darawalada gaarsiinta, cunto -karinta, iyo kushiinka ganacsiga. Waxaad jeclaan doontaa sida ay cuntada kulul u ilaaliso, iyo cuntada qabow qabow oo wax walba ay u gaaraan meeshii ay u baahnaayeen, ammaan iyo dhadhan leh!
Hore: Bacaha dahaarka leh ee bacda qaboojiyaha saaxiibtinimo leh ee bacda qaboojiyaha qadada madow
Xiga: Bacaha kuleylka ah ee caadada ah ayaa leh boorso kuleyl leh oo dahaaran oo loogu talagalay gaarsiinta cuntada kulul
Gaarsiinta Bacda kulul
Bacda Bixinta Kuleylka leh
Bacaha Bixinta Pizza ee kulul
Boorsada Bixinta Dahaaran
Bacaha Bixinta Qaadashada
Bixinta Boorsada Kulka